Daawo:Shil Naxdin Leh Oo ka dhacay Gobolka Sool, – KHAATUMO NEWS
Daawo:Shil Naxdin Leh Oo ka dhacay Gobolka Sool,
Hal ruux ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay, afar kalena waa ku dhaawacantay, kadib markii gaari yar oo ay wateen kula dhacay togga loo yaqaanno WAQA-DERI oo dhanka koonfurta ka xiga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Gaariga oo ay saarnaayeen shan ruux ayaa ka yimid degaanka DOCMO ee koofurta gobolka Sool, waxaana uu ku sii jeeday magaalada Laascaanood, ka hor inta uusan ku dhicin bocol ku taalla togga WAQA-DERI oo ku dhow Laascaanood.
Marka laga yimaado hal qof ee dhintay dhaawacyada afarta kale oo mid kood aad xaaladdiisu u liidato, ayaa lagu dabiibaya isbitaalka Laascaanood, waxaana la qorshaynaya in saacadaha soo socda midka liita loo qaado dhanka magaalada Hargeysa sida ay xaqiijiyeen eheladiisa.
Previous Post: Xukuumadda NN iyo Xukuumadihii ka horeeyey yaa nuglaa Sucuudiga?.
Next Post: Deg Deg:Deni Oo U yeedhay Isimada Puntland,